Belgium Archives - 24 News Press
‘एनआरएन अभियानभित्र रुपान्तरणको बहस आफैंमा क्रान्तिको शुरुवात हो’
ल्ली अम्माई, एनआरएनएको क्षेत्रीय बैठकहरुमा एनआरएन अभियानलाई संस्थागत शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने मुद्धाले यसपटक वै...
जनसम्पर्क समिति बेल्जियमले १०७औँ बीपी जयन्ती स्मरण दिवस भब्य रुपमा सम्पन्न
बेल्जियम, युरोपस्थित नेपाली राजनीतिकको केन्द्र पनि मानिने बेल्जियममा नेपाली कांग्रेसको विदेशस्थित भातृसंगठन जन...
गैर आवासिय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको केन्द्रीय महासचिवमा जानकी गुरूङको उम्मेदवारी घोषणा
लण्डन – गैर आवासिय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको केन्द्रीय अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारी...
एनआरएनए बेल्जियममा सर्वसम्मत अध्यक्षमा चित्र सुवेदी
काठमाण्डाैं । गैर आवासीय नेपाली संघ बेल्जियमको अधिवेशनबाट चित्र सुवेदी सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन भएका छन । बेल्ज...
काठमाण्डौं । विगतदेखि एनआरएनए अभियानमा सक्रिय एक बेल्जियममा बस्दै आएकी महिला व्यवसायी जानकी गुरुङले महासचिवमा...
एनआरएनए आइसिसी उपाध्यक्ष पदमा अर्जुन कुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिने घोषणा
लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइसिसीको आगामी अक्टोवरमा हुन गईरहेको आइसिसी चुनावमा श्रेष्ठले उपाध्यक्...
एनआरएनए अध्यक्षमा अनुजा प्रधानद्वारा उम्मेदवारी घोषणा
बेल्जियम । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एनसीसी बेल्जियमकी उपाध्यक्ष अनुजा प्रधानले एक प्रेश भेटघाट गर्दै एन...
Posted By: 24 News Presson: October 12, 2020
एनआरएनएको क्षेत्रीय बैठकहरुमा एनआरएन अभियानलाई संस्थागत शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने मुद्धाले यसपटक वैधानिकता पायो । खै के सोचेर हो, पंक्तिकारलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समितिको सदस्यमा केही केन्द्रिय पदाधिकारीले ल्याउने प्रस्ताव गरेछन् । गुलामी प्रवृत्तिले मात्र स्थान पाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा मलाई प्रस्ताव गरिनु आफैंमा चकित पार्ने कुरा थियो । केहिले विरोध त गरिहाल्ने भए, गरेछन्, तर केहीले डिल्ली जस्ता आलोचनात्मक मान्छेको संगठनमा आवश्यकता देख्नु राम्रो कुरा भयो भनेछन् । कसैकसैले त ‘ऊ ल्याइनु र उसको रुपान्तरण एजेण्डाको मर्मलाई संगठनको एजेण्डा बनाइनु क्रान्ति नै हो’ पनि भनेका रहेछन् । कारण जेसुकै होस् मिडिया समितिमा मलाई ल्याइयो, गज्जब नै लाग्यो । मेरो निष्कर्षमा भन्नुपर्दा एनआरएनए अभियानले भविष्यको बाटो क्लियर गर्नुपूर्व विगतको दासता चुँडाल्न कमसेकम यो समिति सफल भएको छ भन्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमा पुरानो प्रभावका केही छिटफुट असर देखिए पनि मूलभुत रुपमा अभियानले रुपान्तरणको तयारि कोर्ष पूरा गर्दै छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
अझै पनि आलोचनात्मक चेतसहितको सुझाव वा प्रतिक्रियाबाट साथीहरु तर्सिन्छन् । झन् एनआरएनएका अभियन्ताहरु बढी नै तर्सिन्छन् । सबैले फेवर खोज्ने चलन छ तर मेरो विचारमा त्यो राम्रो प्रवृति हैन । अब संगठनभित्र क्रमशः आलोचना सुन्ने बानी पर्दैछ कि भन्ने आभस हुन थालेको छ । शुरुशुरुमा त कुटपिटमै उत्रिन खोजेझैँ गरेर थर्काउँथे, अचेल त्यस्तो अचाक्ली छैन ।
एक आइसीसी मित्रले बताएअनुसार नियुक्तिको विषयमा साथीहरुलाई मेरो एउटा अनुभव बाँड्न खोजेँ । रोचक कुरो छ । एनआरएनए आइसीसी मिडियाको युरोप कोअर्डिनेटरमा नेतृत्वका केही मित्रहरुले मेरो नाम प्रस्ताव गरेछन् । तीन जनाबाट ‘डिल्लीलाई कुनै हालतमा आइसीसीको मिडियामा ल्याउनु हुन्न’ भन्ने कुरा आएछ । खुबै रस्साकस्सी मच्चिएछ । जे होस् केन्द्रले त्यति ठुलो अवरोध हुँदा पनि मलाई ल्यायो । अझै केही मान्छेहरुले मलाई केन्द्रमा ल्याएकोमा प्रसन्नता ब्याक्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
त्यस्तै युरोपियन मिटिङमा समेत मेरोबारे गाइँगुइँ कुरा भएको सुनेँ । बहसभित्रको बहस हुँदा सेसनहरुमा समेत यसलाई सहभागी गराउनुहुन्न भन्नेकै बहुमत भएछ । केही साथीले अनौपचारिक छलफलमा समेत ‘यसले हुर्मत लिन्छ कुनै पनि समितिमा छिर्न दिन हुन्न’ भन्ने नै रहेको साथीहरुले सूचना दिएका थिए । तर शिव सरले संचालन गरेको बहसमा मलाई ल्याइयो । नत्र खासै रुचिचाहिँ थिएन ।
एनआरएनएमा रुपान्तरण अभियानबारे बहस गर्न यो निर्वाचनको लगत्तै निर्वाचित अध्यक्ष कुमारजीलाई पत्र लेखेरै मैले अनुरोध गरेको थिएँ । यो भनिरहँदा केहिले भन्न सक्छन्, यो त अघिल्लो कार्यकालदेखि आएको मुद्धा हो । हो, शेष घलेको कार्यकालमा सुधार गर्ने (भिजन २०२० एन्ड बियोन्ड) कुरा पास भएको हो, तर ठ्याक्कै रुपान्तरणकै मुद्धा आएको हैन । पत्रकारहरुमध्ये धेरैले नेतृत्वको चाकरी गरिरहे र हरेक सम्मेलन र बैठकको अगाडी ‘महान’ र ‘भब्य’ शब्द राखेर समाचार बनाइरहे। मैले त्यो परम्परालाई रोकेर रुपान्तरणको बहस चलाएकै हो । बेलाबेला सुझाव माग्दा मनमा लागेको कुरा खुलेर राख्ने गर्छु । त्यसैले आँफूसँगै आएको रुपान्तरणसँग ठोक्किँदा मैले आफूलाई कहीँ न कहीँ अपनत्व जस्तो महसुस गरेको पनि छु ।
अहिले नेतृत्वमा भएका केही अग्रजहरुले ‘आलोचना गर्न नडराउने पत्रकार चाहियो तपाईं आउनुस’ भनेर मलाई भनेकै हुन् । घाँटी जोडेर गाला चाट्ने भन्दा खाना र काम दिएर गाला चड्काउने मान्छे खोज्नु कनकमणिलाई बीपीले खोजेझैँ हो भन्ने लागेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा रही आलोचनात्मक सुझाव दिने हैसियत बनाएको छु ।
यो हैन कि मैले कुमारजीलगायत बहालवाला नेतृत्वलाई सम्मान नै गर्दिनँ । गजबले हृदयदेखि श्रद्धा गर्छु र त यो कालमा एनआरएन अभियानबारे मैले सबैभन्दा बढि आलोचनात्मक समीक्षा लेखेँ। उहाँमद्ध्ये कसैको शर्तको पालना गर्न गुलामीको तेल घसेर यो अभियानमा आएको पनि हैन। प्रस्ताव राखेर शर्तहरुको पुलमा टेक्दै आएको पनि हैन । रुपान्तरणको अभियानमा जोड्न नेतृत्वले मलाई निःशर्त ल्याएको हो ।
यो हैन कि कुमारजीको टिमले रुपान्तरण अभियान बेगर ल्याएको भए बसिरहन्थेँ । सायद म अभियानबाट निस्की सकेको हुन्थेँ । म हेर्दा सोझो भए पनि स्वाभिमानी छु। यहाँ प्रमाणको लागि चुनावताकाको एउटा उदाहरण बताउँदा पर्याप्त होला कि जस्तो लाग्छ । मलाई चुनावताका नेपाल जान कुमारजीले निकै अनुरोध गर्नुभएको थियो । कुलजी, राम दाइ, लोकजी र शिवजीलगायतले पनि ‘जाउँ’ भन्नुभएको हो । मैले त्यो बेला दिएको एउटै जवाफले उहाँहरुले दोहोर्‍याएर मलाई एनआरएनए अधिवेशनमा जान अनुरोध गर्नुभएन। ‘मित्र, जुन स्थानमा मानिसको स्वाभिमानलाई बस्तुलाई झैँ मूल्य तोकेर खरिद बिक्री गरिन्छ, त्यो स्वाभिमानलाई बली दिने कसाइ घरमा म कदापि जान्न ।’ मैले साथीहरुलाई भनेको वाक्य नै यही थियो । त्यसैले म कसैको स्वाभिमानको बली दिइने स्थानमा जाँदिनँ र झुक्किएर गएपछि पनि फर्कन बेर लगाउँदिनँ ।
अझै केही साथीहरुले तपाईं एनआरएन मिडिया समितिमा नजानुपर्ने, एनआरएन अभियानमा नजोडिनुपर्ने पनि भन्दैछन् । तर त्यसो भन्ने मित्रहरुले किन त्यसो भन्दैछन्, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। उनीहरुमध्ये धेरैले एनआरएनएको स्थानीय चुनावमा हारेका थिए । साथीहरुका कुनै पद पाए भुइँको टिप्नसमेत पछि नपरेका धेरै उदाहरण छन् हामीसँग । भोट हाल्दा पद र पैसाको शर्त राखेर भोट हालेका छन् । अहिले पद नपाएकोले नै अभियानले संस्थागत रुपान्तरणमा फड्को मार्दै गर्दा एकोहोरो विरोध गरिरहेका छन् । अभियानले संगठनमा रुपान्तरण गर्दै गर्दा के गर्नु पर्थ्यो भन्दा बोल्दैनन् तर नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत र आर्थिक पद्धतिलाई रुपान्तरण गर्ने सबै कुरामा उनीहरुको रुन्चे विरोध देखिन्छ । त्यो प्रवृत्ति गलत यस मानेमा हो कि उनीहरुले यस अभियानलाई संगठित शक्ति हुन दिन चाहन्नन् । विरोध गरेपछि त्यसको विकल्प दिन सक्नुपर्छ । त्यो खासै भेटिएको छैन ।
भोलिको निष्कर्षमा भन्नुपर्दा समेत मेरो राय एजेण्डाप्रधान नै हुने छ । नेतृत्वमा कुलजी, बद्रीजी वा अन्य कोही आए पनि एजेन्डा हेरेर समर्थन, सहयोग वा विरोध हुने छ । ब्यक्तिप्रति पूर्वाग्रही हुने प्रवृत्तिले संस्था वा अभियानलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ। अहिले आएका रुपान्तरणका एजेन्डाले केही अभियन्ता तर्सेका हुन् कि जस्तो देखिँदै छ । केही साथीहरु हड्बडाएका हुन् कि डराएका हुन् मुख फुङ्ग उडेको जस्तो देखिँदै छ । रुपान्तरण भनेको संगठनको अधिरचनाभित्र हुने समग्र क्रान्ति भएकोले कोही पनि त्यसरी डराउनु भएन ।
मैले यो एजेन्डाबारे छलफल गर्दा ‘तपाईं सफल हुनुभयो’ भनेर अध्यक्षलाई भनेको थिएँ । अझै भन्दैछु- ‘रुपान्तरणको एजेण्डागत प्रवेशलाई हेर्दा तपाईंको कार्यकाल सफल भैसक्यो जस्तो लाग्छ कुमारजी ।’ केही आस्थाकर्मीहरुले झण्डाको रंग हेरेर समर्थन र विरोध गर्ने जुन स्वभाव देखाउँदै छन्, त्यो काइदा विरोध वा समर्थनको लागि त्यति राम्रो हैन कि ? अब कसैले तपाईंको आशुरिकरण वा देवत्वकरण गर्न जरुरी छैन । किनभने यो कार्यकालमा ल्याइएको रुपान्तरणका मुलभुत मुद्धाभित्र शेष घलेको कार्यकालमा ल्याइएको संस्थागत सुधारको योजना समेत छिरेको छ । अब यो अभियान संगठनको रुपमा रुपान्तरण हुने तरखरमा छ ।
एउटा कुरो के ठोकेर भन्न सकिन्छ भने अब चाहेर पनि कसैले रुपान्तरणको एजेन्डाबाट पछाडी फर्कने आँट गर्न सक्दैन । यो तपाईंको कार्यकालको महत्वपुर्ण सम्पत्ति हो। पुर्वअध्यक्ष शेष घलेको ‘भिजन २०२० एन्ड बियोन्ड’को सुधार एजेन्डामा टेकेर यो एजेन्डा आयो । त्यो एजेन्डा केवल संरचनाप्रधान थियो भने अहिलेको एजेण्डा समग्र संगठनात्मक गतिको रुपान्तरणमा आधारित छ । नेतृत्वमा रहेकाहरु निरन्तर यही अभियानमा हिँड्ने यात्री भएकोले उहाँहरुका अत्याधिक गल्तिहरु हुन सक्छन् । त्यो स्वाभिक कुरा ह, तर पनि निर्णायक आँटले सबै गल्तीहरुलाई निषेध गर्ने छ।
तर कसैले उहाँहरुको राजिनामा मागेका कुराहरु पनि सुन्नमा आए । अध्यक्ष वा महासचिवको राजीनामा मागिएको छ रे भन्ने हल्ला चलाइयो ! आरोपमा ‘चुनावहरुमा भोटरको किनबेच स्वीकारियो’ भन्ने कुरा आयो । गल्तिको ढाकछोप गर्ने भन्दा गल्तीबारे पश्चाताप गर्ने मान्छे महान हो । त्यो गल्ती स्वीकारेर चुनावी पद्धतिमा रुपान्तरण गर्न खोज्दा नेतृत्वलाई स्याबासी दिनुपर्ने थियो । तर खै गल्ति स्वीकार नगर्नेलाई राम्रो र गल्ती स्वीकार गरेर विकल्पसहित आउनेलाई खेद्ने प्रवृत्ति सहज निकासको लागि सहयोगी हुन्न होला ।
अर्को डिल्लीले संगठनको निर्मम समीक्षामा ‘कैँची हैन बन्चरो चलाउँछ, त्यसैले संगठनमा ल्याउनु हुन्न’ भन्ने प्रवृत्ति पनि त्यहीमध्येको हो भन्ने सुनेको छु । म त कसैको विवादित अभियानहरुमा जान्न भनेको हो । तर तपाईंहरु मिलेर मलाई ल्याउनुभयो । खै ! त्यसले मलाई सकारात्मक रुपमा हेर्ने केहीलाई राम्रै लाग्यो होला तर केहीलाई राम्रो नलागेको बुझेको छु । मैले केन्द्रका केही अग्रजहरुलाई भनेको पनि थिएँ, ‘अझै एनआरएनएभित्र हाम्रो स्रोत, साधन र संरचना बदलिएन । समयानुकुल संरचना बदलिएन भने संस्थाले काम गर्न सक्दैन । साथसाथै हामी कहाँ जाने हो, संस्थालाई कसरी लैजाने हो भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ । ती लक्ष्य पूरा गर्न संरचना र कार्यक्रम पनि फेर्नुपर्ने भएकाले रुपान्तरणको प्रस्ताव सँगै तपाइलाई ल्याउनुपरेको हो ।’ उत्तर यहि थियो, र मैले सहमति जनाएको पनि सत्य हो ।
अहिले कुमार सरलगायतको नेतृत्व डायस्पोराको सत्तापक्ष जस्तै हो, त्यसैले समर्थन भन्दा आलोचना बढि हुनु स्वाभाविकै होला । तर रुपान्तरणको एजेन्डा ल्याएर विरोधको लागि कुरि बसेकाहरुको निद हराम गर्ने तपाईंमाथि अस्वाभाविक आक्रमण हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । एजेन्डा तपाईंले कसैको प्रभावबाट ल्याए पनि आफैं ल्याए पनि रुपान्तरणको यो एजेन्डा संगठनमा अति आवश्यक थियो । यो लागु गर्न सबैको निःशर्त सहयोग आवश्यक छ । अहिले ल्याएका एजेन्डाले एनआरएन अभियानलाई संगठनमा रुपान्तरण गर्ने हुँदा एनआरएनएभित्र हुने सबैले केही कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका केही कार्यभार बुँदागत राख्ने प्रयास गरिएको छ-
१. रुपान्तरणको मर्म र कार्यभारबारेको बहसलाई केन्द्रदेखि तलसम्म तीव्र बनाउने ।
२. मिडियासँगको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न प्रत्येक समन्वय परिषदको अनियमितता र अपारदर्शिताकाबारे मिडियाकर्मीलाई वार्षिक रिपोर्ट तयार पारी क्षेत्रीय सम्मेलनमा पेश गर्न लगाउने । यसले मिडियाकर्मीको अनुसन्धान गर्ने क्षमताको विकास हुनुको साथै एनआरएनसँगको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । यसले संगठन र प्रेशद्वारा दोहोरो सुचनाको प्रभावकारी प्रवाह हुन्छ र केन्द्रले हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषदबारे यथार्थ ज्ञान हासिल गर्दछ । अनुसन्धान गरेर लेख्न नसक्ने पत्रकार साहित्यतिर बियाँलिञ्छन् ।
३. समन्वय परिषदमा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई प्रोत्साहनको नीति बनाउने ।
४. रुपान्तरणपूर्व र रुपान्तरणपछिका कार्यभारबारे नीति निर्माण गर्दै जाने ।
५. अनियमितता हुने स्थानमा निर्मम प्रहार गर्ने । उम्मेदवारले उधारोमा सदस्यता आफै बनाएर चुनावमा प्रयोग गर्ने पद्धतिले स्थानीय स्तरको आर्थिक अनियमितता मौलाएको थियो । बेल्जियमको सवालमा सदस्यताको रकम बहालवाला टिमले प्राप्त गरेको छैन र केन्द्रले पाउने पैसा अझै नपुगेकोले ताकेता पत्रहरु आइरहेको वर्तमान अवस्थामा यसको विकल्प खोजिनु अन्यथा हैन । यसले भ्रष्ट्राचार हुने स्थानमा होस् उड्ने गरी हिर्काए पनि स्थानीय आर्थिक श्रोतको विकल्प दिन सकेको छैन ।
अन्तमा गल्ती अभियानको क्रममा पनि हुन्छन् र संगठन निर्माणको क्रममा पनि हुन्छन् । त्यसैले गल्तीबाट डराएर अभियानबाट तर्कने वा तर्सने काइदा पनि राम्रो हैन । सिक्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्जान गल्तीबाट हुने सिकाइले सुधार र सुधारहरूको गुणात्मक जोडले संस्था वा ब्याक्तिको रुपान्तरण हुने हो । तर के कुरा सत्य हो भने गल्तिको आभाष हुँदाहुँदै सुधार्ने प्रयत्न गरिएन भने त्यो गल्ति नभएर नियत बन्न पुग्छ । नियत कदापि सुधार्न सकिँदैन र त्यसले अन्ततः संस्थालाई धरासायी बनाउदै लाग्छ। त्यसैले नेतृत्वले रुपान्तरणको अभियानलाई परिणाममुखी बनाउन इमान्दारिताका साथ लागोस् र एनआरएनएको अभियानलाई डायस्पोराको एक विश्वासिलो र शक्तिशाली संगठन बनाउन कुनै कसर बाँकी नराखोस् । अस्तु ।
Posted By: 24 News Presson: September 14, 2020
बेल्जियम, युरोपस्थित नेपाली राजनीतिकको केन्द्र पनि मानिने बेल्जियममा नेपाली कांग्रेसको विदेशस्थित भातृसंगठन जनसम्पर्क समितिले महामानव बिपी कोइरालाको सम्झना तथा उहाँको १०७औँ जयन्ती तथा स्मरण दिवस मनाएको छ।
जनसम्पर्क समिति बेल्जियमले नेपाली राजनीतिका महान् नायक, प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रवर्तक तथा नेपाली साहित्य जगतका अति विशिष्ट व्यक्तित्व जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको १०७औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा ‘बीपी कोइराला र वर्तमान नेपाली कांग्रेस’ नामक शीर्षकमा बीपी कोइरालाको जन्मजयन्ती मनाएको हो ।
जनसम्पर्क समिति बेल्जियमकी सभापति श्रीमती सीता सापकोटाका अनुसार वर्तमान कठिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सामुहिक भेला भइ कार्यक्रम गर्न सम्भव नभएकाले विद्युतीय प्रणाली जुममार्फत नेपाली कांग्रेसका संस्थापक, महामानव बीपी कोइरालाको १०७औँ जन्म जयन्ती भब्य रुपमा मनाएर आफ्ना नेताप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरेका थिए।
नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका सभापति श्रीमती सीता सापकोटाको सभापतित्वमा संचालित सो कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष ध्रुवराज पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता र नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष इन्द्र क्षेत्री पकवान तथा नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका निवर्तमान अध्यक्ष शुभाष जोशीको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त जुम बैठकलाई नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका महामन्त्री दिनेश भन्डारीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने उपाध्यक्ष नरहरि सापकोटाले स्वागत मन्तब्य राख्नुभएको थियो ।
उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघको पूर्वसचिव श्रीमती जानकी गुरुङ, नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी, सदस्य एवं सल्लाहकारहरुले नेपाली काग्रेसका सस्थापक नेता स्व. बीपी कोइरालाको स्मरण गर्दै उहाँले मुलुकको लागि पुऱ्याउनुभएको योगदानको चर्चा गर्दै उहाँप्रति हार्दिक सम्मानका साथ श्रदासुमन अर्पण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा गैरआवासीय अभियन्तासमेत रहेकी पूर्वसभापति जानकी गुरुङले संगठन आफ्ना मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्ने बताउँदै वर्तमान कार्यसमितिले अविलम्ब अधिवेशन गर्ने बवताबरण तयार गरेर अघि बढ्नुपर्ने आफ्नो राय राख्नुभयो ।कार्यक्रमको अन्त्यमा सभापति श्रीमती सापकोटाले पार्टीका विविध विषयमा राय राख्दै वर्तमान सरकार भ्रस्टाचारमा डुब्दा पनि नेपाली कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको संगठन विधि र विधान अनुरुप चल्न नसकेको, आफ्ना भात्रि तथा सुभेक्ष्युक संगठनलाइ समयानुकुल व्यवहार गर्न नसकेको , साथै आगामी दिनमा सम्पूर्ण त्रुटीलाइ विवेचना गरेर बीपीले कल्पना गरेको बाटोमा कांग्रेसलाई लैजान सके मात्र नेपाली कांग्रेसको भविष्य भएको जिकिर गर्दै ब्यस्त समयका बाबजुद पनि आफ्नो महत्वपुर्ण समय निकालेर महामानव तथा नेपाली कांग्रेसका मार्गदर्शक नेताप्रति श्रदासुमन अर्पण गर्न उपस्थित हुनुहुने सहभागीहरुप्रति धन्यवाद ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
Posted By: 24 News Presson: August 20, 2019
लण्डन – गैर आवासिय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको केन्द्रीय अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढिरहेको छ । यसै क्रममा महासचिवमा जानकी गुरूङले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । इमान्दारिता पहिला, संस्थागत बिकासमा महिला नाराका साथ महासचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी गुरुङ एनआएनए अभियानमा स्थापित र परिचित नाम मात्रै होइन संस्थापक अभियन्ता नै हुनुहुन्छ ।
एनआरएनएको आगामी कार्यकाल २०१९-२०२१को लागि महासचिवको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएकी उहाँ महासचिवको रुपमा पहिलो महिला उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ ।
एनआएनएको वर्तमान बहालवाला सचिवको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्नुभएकी उहाँले संस्थामा महिला नेतृत्व र सहभागितालाई अक्षरमा होइन, व्यबहारमा लागु गरेर देखाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । युरोपको बेल्जीयममा बसोबास गर्दे आउनुभएकी उहाँ यस अघि एनआएन बेल्जीयमको कार्यसमितिको अध्यक्ष भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएको छ भने युरोप क्षेत्रीय समितिको सह संयोजक र अन्तराष्ट्रिय समितिको सदस्य समेत भइसक्नुभएको छ । अत्यन्त स्पष्ट वक्ता, मिलनसार र मेहनती छवी भएकी उहाँ सफल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ ।
उहाँले होटल रेष्टुरेण्ट, ट्राभल, मनी ट्रान्सफर लगायतका व्यवसायमा सहभागि भइ विभिन्न सामाजिक सेवाका कामहरुमा समेत सक्रियता साथ लागिरहनुभएको छ । उहाँले नेपालका दूरदराजका वस्तीहरुमा महिला र बालबालीकाको सेवा र उत्थानमा लक्षीत कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहनुभएको छ ।
उहाँले २००५ मा एनआरएनए बेल्जियम तदर्थ समितिको संस्थापक कोषाध्यक्षको रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो भने २०६६ देखी २००८ सम्म एनआरएनए बेल्जियमको सल्लाहाकारको रुपमा काम गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि उहाँ २००७-२००९ को लागि एनआरएनए युरोप सहसँयोजकमा निर्वाचित भइ काम गर्नुभयो भने एनआरएनए बेल्जियमको तेश्रो कार्यकालको अध्यक्षको रुपमा २०११-२०१३ मा भुमिका निर्वाह गर्नुभयो । त्यसपछि २०१३-२०१५ मा एनआरएनए बेल्जियमको तर्फबाट आइसिसी सदस्य निर्वाचित हुनुभयो भने फेरी २०१५-२०१७ का लागि पनि एनआरएनए बेल्जियमको तर्फबाट आइसिसी सदस्यको रुपमा काम गरिसक्नुभएको छ ।
पहिलो महिला महासचिवको रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गरिरहँदा उहाँले एन सिसि आइ सिसीमा बजेट पद्दति लागु गरी बालबालिका, युवा, महिला, पत्रकार र कला श्रीजना र नेपाल प्रबर्द्दन लगायतका बिषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम र निती तर्जुमा गर्नको लागि आफ्नो उम्मेदवारी हो भन्नुभएको छ ।
आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुपर्ने कारणका बारेमा उहाँ भन्नुहुन्छ-
“इमान्दारिता पहिला, संस्थागत बिकासमा महिला”
यसर्थ, म संस्थाको आगामी कार्यकाल २०१९-२०२१ को लागि महासचिब पदको आकाँक्षीको रूपमा उभिने घोषणा गर्दछु । यहाँहरु सबैको सहयोग र समर्थनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
– संस्थामा महिला नेतृत्व र सहभागितालाई अक्षरमा होइन, व्यबहारमा लागु गरेर देखाउन
– एन सिसि आइ सिसीमा बजेट पद्दति लागु गरी बालबालिका, युवा, महिला, पत्रकार र कला श्रीजना र नेपाल प्रबर्द्दन लगायतका बिषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम र निती तर्जुमा गर्न
– संस्थालाई थप पारदर्शिता, चुस्त सचिबालय र व्याबहारिक संस्था बनाउन
– मुलूकको बिकास र समृद्धिको लागि सामुहिक लगानीलाई विश्वासिलो ढंगले लागु गर्न
– संस्थामा सबैलाई आबद्धताका गराउन सरल र सहज बातावरण बनाउन
– दक्ष, प्राबिधिक र बौद्धिक जनशक्तिलाई देश बिकासमा सरिक गराउन बिशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्न
– आमा (महिला) मार्फत दोश्रो पुस्तालाई संस्थामा सकृय गराउन बिशेष कार्यक्रम लागु गर्न
– संस्थामा मौलाउदै गएको रकमी, कलमी र सबैखाले गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न
बर्तमान केन्द्रिय सचिब
केन्द्रिय महासचिबको उम्मेदवार
गैरआबासिय नेपाली सघ
* धन्यवाद *
Posted By: 24 News Presson: August 19, 2019
काठमाण्डाैं । गैर आवासीय नेपाली संघ बेल्जियमको अधिवेशनबाट चित्र सुवेदी सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन भएका छन । बेल्जियममा पहिलो अधिवेशनपछि सातौं अधिवेशनमा आएर सर्वसम्मत नेत्रित्व चयन भएको हाे ।
आइसीसी सदस्यमा सुवास जोशी (सन्तोष ) र कमल पन्थी सर्वसम्मत भएका छन् । कार्यसमितिको उपाध्यक्षहरुमा अनुजा प्रधान, आङमाया लामा, खड्क केसी, गंगा शर्मा, घनश्याम काफ्ले, नारायण सिलवाल र महिला उपाध्यक्ष हरी भट्टराई निर्वाचित भए भने महासचिवमा तीर्थ धमला, सचिवमा कर्ण अधिकारी, जनक सुवेदी र दीपक न्यौपाने, कोषiध्यक्षमा प्रकाश गिरी, सहकोषाध्यक्षमा जीवन शर्मा, महिला संयोजकमा शुशीला खतिवडा, युवा संयोजकमा काशी दनाइ, सदस्यहरुमा कुलबहादुर कार्की लुभेन, सुमन बराल एन्ट्रोपेन, दौलतकुमार साम्ब ब्रुज, ज्ञानेन्द्र घिमिरे गेन्ट, सुवास भट्ट ब्रुसेल, कुम शाही सेन्त्रुदिन, ओस्टेन्डे भरत पन्त रहेका छन् । खुल्ला सदस्यतर्फ मदन डवाडी, सुजन ढकाल, मिनदोर्जे थापा, चेतनारायण दाहाल , रामप्रसाद शर्मा, कमल सिटौला र महिला सदस्यमा गीता लामा, रस्मिना गिरी राजभन्डारी, सरस्वती सुवेदी सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन।
सातौं अधिवेशनमा नेपालको संघीय संसदका राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री वीरबहादुर बलायर, लीलामणी पोख्रेल, बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापा, आइसीसी उपाध्यक्ष कुमार पन्त, सचिब जानकी गुरुङ, युरोप संयोजक शिव बरुवालले शुभकामना दिएका थिए । एनआरएनए बेल्जियम अध्यक्ष लोक दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सन्चालन महासचिव आङमाया लामाले गरेकी थिइन् ।
काठमाण्डौं । विगतदेखि एनआरएनए अभियानमा सक्रिय एक बेल्जियममा बस्दै आएकी महिला व्यवसायी जानकी गुरुङले महासचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन् ।
एनआरएनए सदस्यदेखि एनआरएन बेल्जियम अध्यक्ष हुँदै हाल सचिव गुरुङले महासचिवमा उम्मेदवारी दिन लागेकी हुन् ।
विभिन्न व्यवसायमा आवद्ध उनि होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल, मनिटान्सफर, सामाजिक कार्यमा निकै सक्रिय रहि नेपालमा दुरगम गाउँवस्तिमा महिला उत्थान सम्वन्धी जनचेतनामुलक काम पनि गर्दै आएकी छिन् ।
एनआरएनए अभियान भनेको कहिले काही यस्तो अवस्था आउँछ, आफनो व्यापार व्यवसायलाई थाती राखेर समेत समय दिन सक्नुपर्छ । भन्ने भावनाको व्यक्त गर्दै संस्थाको एकतालाई पनि वुझन सक्नुपर्छ । विश्वभर रहेका नेपालीको समस्या होस या लगानीको सन्दर्भ अनि समग्र एनआरएनए महिलाको भावना सम्वोधन जस्ता यिनै एजेण्डाहरुमा टेकेर आफ्नो उम्मेदवारी रहने बताएकी छिन ।
Posted By: 24 News Presson: July 22, 2019
लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइसिसीको आगामी अक्टोवरमा हुन गईरहेको आइसिसी चुनावमा श्रेष्ठले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ । बेल्जियममा लामो समय देखि बसोबासा गर्दै आउनु भएको श्रेष्ठ एक सफल व्यवसायी तथा एनआरएनए सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ ।
श्रेष्ठले २००९-२०११ , २०११- २०१३ आइसिसीको सदस्य भएर काम गर्नु भएको थियो भने २०१३ -२०१५ युरोप संयोजक भएर काम गर्नु भएको थियो । प्रवासमा लामो समयदेखि बस्दै विभिन्न सामाजिक संस्थामा क्रियाशील भएकाले एनआरएन अभियानमा अगाडि बढ्दै एनआरएनमार्फत विभिन्न मानवीय तथा कल्याणकारी काममा श्रेष्ठ सक्रिय हुने गरेका छन् ।एनआरएनमा सक्षम नेतृत्व, साझा प्रतिनिधित्व, पारदर्शीता, सामूहिक एकता, सबै नेपाली बीच एकता हुनुपर्छ भन्ने विचार श्रेष्ठले राख्नु हुन्छ ।
लामो समय देखि एनआरएनको अभियानमा सहभागी उनि आइसिसीको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो । महाधिवेशनमा उम्मेदवारको रुपमा आफूलाई सबैले समर्थन गर्ने मागअनुसार उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको श्रेष्ठले 24newspress.com लाइ जानकारी गराउनुभयो ।
Posted By: 24 News Presson: July 11, 2019
बेल्जियम । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एनसीसी बेल्जियमकी उपाध्यक्ष अनुजा प्रधानले एक प्रेश भेटघाट गर्दै एनआरएनए एनसीसी बेल्जियम (२०१९–२०२१) को लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् ।
व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता अनुजा प्रधान एनआरएनए बेल्जियममा होनाहार सक्रिय महिला हुन् । एनआरएनए तथा महिला उत्थानका कार्यक्रममा उनले प्राय नेतृत्वदायी भूमिका निभाएकी हुन्छिन ।
सामाजिक अभियानहरु हुन् वा महिला समस्याका कुराहरू हुन् अनुजा इमान्दारीपुर्वक भूमिका निभाउन सफल छन् । उनलाई जुन अभियानले जन्मायो एकपटक त्यो अभियानको नेतृत्वमा लैजादा न्याय हुने देखिन्छ’-भन्नेहरु समाजमा धेरै छन् ।
‘हामी महिलाहरु कतिन्ज्याल सहायक भूमिकामा बस्ने ? आदरणीय दिदीहरु र दाजुहरुको पसिनाले हुर्केको एनआरएनए बेल्जियममा हामीले नेतृत्व गर्न किन नसक्ने ? हामी महिलाहरु बेल्जियमको नेपाली समाजको आधि हिस्सा हो । हामी महिलाहरु राजनीतिक रुपले विभाजित नभैकन एक ढिक्का भयौं भने नेतृत्वमा पुग्न कसैले रोक्न सक्दैन’, अनुजाले आफ्नो उमेद्वारी घोषणा गर्दा भाबुक हुदै भन्दै थिइन, ‘अब सम्पूर्ण महिलाहरु एक जुट बनेर नेतृत्वमा पुन हस्तक्षेप गर्ने बेला आएको छ। हामी एक भयौं भने हामीले जितेर देखाई दिन्छौं। सम्मानित दिदीलाई अन्तराष्ट्रिय सचिब जस्तो गरिमामय पद कसैले उपहार दिएको हैन। उहाँले लडेर लिनुभएको हो। अन्तराष्ट्रिय महिला संयोजक, उपाध्यक्ष, आइसीसीमा समेत धेरै दिदीहरु पुगी सक्नु भएको छ ।’
हामी पर्ख र हेर हैन संघर्ष गर, लडाई जित र पद खोसेर लेउ भन्ने नारा सहित चुनाबको मैदानमा जानुको विकल्प छैन। हामी हेपिएका छौ भनेर मात्र हुदैन उनि बोल्दै गइन, ‘हाम्रो आवाज बुलन्द पारौं र सम्झौताहीन ब्यालेटको लडाइमा आमा,दिदी बैनी र हाम्रो अभियानलाई साथ दिने सम्पूर्ण दाजुभाइहरु मौरीझैँ एकाकार बनेर लागौं । मेरो सम्पूर्ण आमा, सानिमा, दिदी बहिनी र अग्रजहरुलाई अनुरोध छ अब नारी हिम्मतलाई मर्न नदिउँ ।’
अन्तमा उनले सम्पूर्ण महिलाहरुलाई संकेत गर्दै थपिन,’महिलाहरुलाई आरक्षणमुखी निरिह सहयोगी बनाउने चलन बदल्नु छ,नारीलाई नेतृत्व गर्न सक्ने स्वाभिमान अभियन्ता बनाएर सामाजिक रुपान्तरणमा महिलाहरुको जिम्मेवारी गर्जन सहित पुरा गर्न मेरो उमेद्वारी हो। सम्पूर्ण जागृत नारीमनहरुलाई मेरो सम्मान छ, नारी एकता जिन्दाबाद !’
यही १० जुलाईमा एक प्रेसमिट गर्दै उनले एनआरएनएका अग्रज अभियन्ताहरु र साथीहरूसँगको परामर्शमा आँफुले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने मनस्थितिमा पुगेको र कुनै हालतमा आफ्नो उमेद्वारी नझिक्ने बताइन ।
अनुजाले एनआरएनए बेल्जियमको महासचिव भएर कार्यकाल पूरा गरी अहिले २०१७–२०१९ मा उपाध्यक्ष रहेर सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दै छन् ।
एनआरएन बेल्जियमले जनवरीदेखि फेब्रुअरीसम्म ‘च्यारिटी, एक्सपो र होलिडे फेयर’ आयोजना गर्ने
Posted By: 24 News Presson: December 30, 2018
आगामी २०१९ जनवरी २० आइतवार गेण्ट, २४ देखि २७ जनवरी एन्तोर्प र ७ देखि १० फेब्रुअरी सम्म ब्रसेल्समा नेपाली राजदूतावासको तत्वावधानमा हुने प्रदर्शनी र होलिडे फेयर सम्पन्न गर्नका लागि नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख सुधीर भट्टराईको सँयोजकत्वमा निम्न सदस्यहरु जानकी गुरुड, शिव बरुवाल, पदम गुरुड, सरस्वती चापागाई, लोक दाहाल, गँगाधर गौतम, दीपेन्द्र केसी, जीत लामा, यामु निरौला, श्याम श्रेष्ठ, डिल्ली अम्माई, बिनोद न्यौपाने, रवीन्द्रमान श्रेष्ठ, बाबुराजा लामा, नेत्र मगर, सुवास जोशी, बोधराज पौडेल, बालकृष्ण कडेल रहनु भएको व्यवस्थापन समिति निर्माण गरिएको छ ।
विनय अधिकारी /लन्डन
बेल्जियमका विभित्र शहरहरूमा नेपाली च्यारिटी, एक्सपो र होलिडे फेयर आयोजना गरिने भएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ बेल्जियम र नेपाली दुतावासको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न लागिएको हो । एनअनरएन बेल्जियमका अध्यक्ष लोक दाहालका अनुसार त्यसको तयारिको लागि दुतावास लगायत विभिन्न संघ संस्था सँग २३ डिसेम्बरमा भएको अन्तरक्रिया र छलफलपछि ती कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने निर्णय भएको हो ।
दाहालले जनवरी देखि फेब्रुअरीसम्म बेल्जियमका विभिन्न शहरमा कार्यक्रम आयोजना गर्न कार्यदल बनाएको जानकारी दिनुभयो । जस अनुसार एक देश एक च्यारिटी सम्वन्धमा छलफल हुँदा सो च्यारिटी कार्यक्रमको स्वरुप, योजना र कार्यविधि तय गर्न अध्यक्ष लोक दाहालको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनेको छ । साथै नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख सुधीर भट्टराईको सँयोजकत्वमा आगामी २०१९ जनवरी २० आइतवार गेण्ट, २४ देखि २७ जनवरी एन्तोर्प र ७ देखि १० फेब्रुअरी सम्म ब्रसेल्समा नेपाली राजदूतावासको तत्वावधानमा हुने प्रदर्शनी र होलिडे फेयर सम्पन्न गर्नका लागि अर्को कार्यदल बनाइएको हो ।
एक्स्पो र होलिडे फेयरमा नेपाली सामाग्रीको स्टल २ वटा (एउटाको ५०० यूरोका दरले) तथा पर्यटन तथा ट्राभलको १ वटा (एक हजार शुल्क) रहनेछ । एनआरएन बेल्जियमको आयोजनामा मिति २३ डिसेम्वर २०१८ मा नेपाली राजदूतावास तथा स्थानीय संघसंस्थाबीच भएको संयुक्त छलफल तथा बैठक निर्णयअनुसार दाहालको नेतृत्वमा रहेको कार्ययदलमा एनआरएन केन्द्रीय सदस्यहरु पदम गुरूङ, सरस्वती चापागाई, लीला मानन्धर, नेव्यस अध्यक्ष यामु निरौला, नेव्यस महासचिव मदन दवाडी सदस्य रहनुभएको छ ।
नेपाली संघसंस्था तथा समुदायवीच एनआरएनले समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस प्रयोजनका लागि एनआरएन मार्फत आर्थिक व्यवस्थापन गर्न आडमाया लामा, हरि भट्टराई र जीवन शर्मा सम्मिलित अर्थ समिति निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी बैठकमा केन्द्रीय भवन निर्माणका लागि सहयोग रकम बोल्नु भै दिन वाँकी नामावली केन्द्रबाट प्राप्त भै आए बमोजिम राष्ट्रिय समितिले सम्बन्धितलाई औपचारिक जानकारी दिने निर्णय गरिएको छ । हेर्ननुहोस बैठकका निर्णयहरू जस्ताको तस्तै;
एनअरएन बेल्जियमको आयोजनामा मिति २३ डिसेम्वर २०१८ मा नेपाली राजदूतावास तथा स्थानीय सँघसँस्थाहरुवीच भएको सँयुक्त छलफल र बैठकका निर्णयहरुः
१. एक देश एक च्यारिटी सम्वन्धमा छलफल हुदा सो च्यारिटी कार्यक्रमको स्वरुप, योजना र कार्यविधि तय गर्न अध्यक्ष लोक दाहालको नेतृत्वमा एनआरएन केन्द्रीय सदस्यहरु पदम गुरुड, सरस्वती चापागाई, लीला मानन्धर, नेव्यस अध्यक्ष यामु निरौला, नेव्यस महासचिव मदन दवाडी सदस्य तथा केन्द्रीय कार्यदलका सदस्य भीम जोशी सदस्य सचिव रहेको कार्यदल निर्माण गरियो र यो दलले गठन भएका दिनदेखि १ महिनाभित्र कार्यक्रम र परियोजना वारे ठोस राष्ट्रिय समितिमा पेश गर्नेछ ।
२. आगामी २०१९ जनवरी २० आइतवार गेण्ट, २४ देखि २७ जनवरी एन्तोर्प र ७ देखि १० फेब्रुअरी सम्म ब्रसेल्समा नेपाली राजदूतावासको तत्वावधानमा हुने प्रदर्शनी र होलिडे फेयर सम्पन्न गर्नका लागि नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख सुधीर भट्टराईको सँयोजकत्वमा निम्न सदस्यहरु जानकी गुरुड, शिव बरुवाल, पदम गुरुड।, सरस्वती चापागाई, लोक दाहाल, गँगाधर गौतम, दीपेन्द्र केसी, जीत लामा, यामु निरौला, श्याम श्रेष्ठ, डिल्ली अम्माई, बिनोद न्यौपाने, रवीन्द्रमान श्रेष्ठ, बाबुराजा लामा, नेत्र मगर, सुवास जोशी, बोधराज पौडेल, बालकृष्ण कडेल रहनु भएको व्यवस्थापन समिति निर्माण गरियो । नेपाली सँघसँस्था तथा समुदायवीच एनआरएनले समन्वय गर्ने । यस प्रयोजनका लागि एनआरएन मार्फत आर्थिक व्यवस्थापन गर्न आडमाया लामा, हरि भट्टराई र जीवन शर्मा रहनु भएको अर्थ समिति निर्माण गरियो ।
३. केन्द्रीय भवन निर्माणका लागि सहयोग रकम बोल्नु भै दिन वाँकी नामावली केन्द्रबाट प्राप्त भै आए बमोजिम राष्ट्रिय समितिले सम्बन्धितलाई औपचारिक जानकारी दिने ।
४. एक्स्पो र होलिडे फेयरमा नेपाली सामाग्रीको स्टल २ वटा (एउटाको ५०० यूरोका दरले ) तथा पर्यटन तथा ट्राभलको १ वटा (एक हजार शुल्क) रहने जानकारी सहित सो को लागि आव्हान गर्ने ।
जनसम्पर्क समिति बेल्जियमद्वारा ढुंगेल रिहाईको भर्त्सना (बिज्ञप्ति सहित)
Posted By: 24 News Presson: June 05, 2018
बेल्जियम – कांग्रेस जनसम्पर्क समिति बेल्जियमले बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयको भत्र्सना गरेकाे छ ।समितिले विज्ञप्ती जारीगर्दै यो निर्णय विधिको शासन, कानूनी सर्वोच्चता र मानव अधिकार बिरुद्ध रहेको जनाएको छ।
‘बालकृष्ण ढुंगेल रिहाई गणतन्त्र बिरुद्धको षडन्त्र, दण्डहीनतालाई प्रश्रय र एकदलीय कम्युनिष्ट शासनको अभ्यास हुँदैछ भन्ने संकेत हो,’ जनसम्पर्क समितिकी अध्यक्ष सीता सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सहीदहरुप्रतिको अपमान हो।’ जनसम्पर्क समितिले अविलम्ब निर्णय फिर्ता लिएर कानुनी राज्यको सुनिश्चिता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ढुंगेल प्रकरण द्वन्द्वकालीन घटना नभएको भन्दै सरकारले माफी दिन नमिल्ने गरी आजीवन जेल सजाय गरेको फैसला उल्टाएर माफी दिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको समितिले ठहर गरेको छ। ‘यो कार्यको हामी कडा निन्दा र भत्र्सना गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र कानुनी सर्वोच्चताका पक्षधर नेपालका सबै हितैषी अन्र्तराष्ट्रिय निकायलाई समेत कानुनी सर्वोच्चता र विधिको शासनको सम्मान गर्न सरकारलाई सचेत गराउन आग्रह गरिएको छ।